Fanapahan-doha, fandrasarasana lehilahy iray : nidoboka am-ponja i Célin sy ny namany | NewsMada
Fanapahan-doha, fandrasarasana lehilahy iray : nidoboka am-ponja i Célin sy ny namany
Tsy nisy afa-bela fa avy hatrany dia nadoboky ny mpitsara mpanao famotorana am-ponja vonjimaika, ao Ambalatavoahangy, Toamasina, ny alakamisy tolakandro teo, i Célin sy ireo namany enina. Ireto farany izay nanapa-doha, nandrasarasa ilay rangahy, tao Ambodibonara, Mahambo.
Miandry ny fitsarana azy any Ambalatavoahangy ireo fito mianadahy voarohirohy tamin’ny raharaha famonoan’ olona mahatsiravina tany Salafaina, fokontany Ambodibonara, Fenoarivo atsinanana, ny alin’ny alarobia 24 janoary lasa teo. Nidoboka am-ponja avokoa izy ireo. Ny alakamisy teo, nentina teny amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny raharaha, nanaovan’ny mpitsara mpanao famotorana fanadihadiana. Voasambotra ny alakamisy 25 janoary lasa teo izy rehetra ireo, taorian’ny vonoan’olona nitranga tany Salafaina ny 24 janoary.
Notetitetehina ilay rangahy io, ary nalana ny lohany, ny tongony, ny tanany. Tao anaty rano ny nahitan’ny olona ny razana ny ampitso maraina. Fantatra ny nahavanon-doza ka nokarohin’ny zandary avy hatrany ary tratra avokoa ireo olona ireo, izay nisy an’i Célin, ilay voalaza fa olon-dratsy sady mpitana ody tany an-toerana. Efa mpiara-manao asa ratsy aminy ny hafa, ankoatra ny ramatoa izay mpaniraka, vadin’ilay novonoina teo aloha. Vola telo hetsy ariary namonoana tamin’ny fomba feno habibiana ilay raim-pianakaviana. Miandry ny fotoam-pitsarana azy ny raharaha.
Mbola tsy hita i Tovolahy Patrice
Ankoatra ity tranga tany Salafaina ity, mitana ny sain’olona maro koa ny momba an’i Tovolahy Patrice mpiasa eo anivon’ny SMMC, sampana iray ao amin’ny seranantsambon’ i Toamasina. Hatreto tsy nandrenesam-peo kanefa ireo jiolahy raha misy takalon’ aina ilaina fa tsy re maty, tsy fantatra na velona. Mandeha ny fikarohan’ny polisy momba ity raharaha ity.
Tranga iray tany Toamasina ny alarobia teo, ny fisian’ny roa lahy nandeha moto voalaza fa mitondra basy. Nosakanana teo amin’ny lapan’ny Tanàna ireo ary tratra saingy navotsotra avy eo. Miteraka ahiahy amin’ny olona ity tranga ity, nahoana no navotsotra, sa diso ny vaovao azon’ny mpitandro filaminana?